Yintoni endimele ndiyazi malunga ne-backlink ephezulu ye-SEO ukwakha iwebhusayithi yam?
Ngaba uyasazi isizathu sokuba kukunika zibaluleke kangaka SEO? Ingxaki kukuba abantu abaninzi kakhulu uqhelene isihloko web amakhonkco ezisemgangathweni bakholelwa ukuba igalelo nje ukuba isigqibo sokugqibela Google kwi ewonga izikhundla yokukhangela ranking - ngasinye website, blog, etc. Kakade, ukusikisela okunjalo kunengqiqo. Enyanisweni kunjalo, uphando olutshanje luqinisekisile ukuba yonke iprofayile ye-intanethi ye-intanethi (kungenjalo, i-backlink ephezulu ye-SEO) ngokwenene phakathi kwezinto ezintathu ezibaluleke kakhulu ezibhekiselwe kwi-Google yolwazi oluphezulu lwe-algorithm.
Kakade, ukubaluleka kokubaluleka kwe-backlinks esemgangathweni kuyaziwa ngabantu bonke abandakanyekayo kwishishini lokukhangela ukukhangela. Kodwa ngoku igalelo labo liye lomelela ngakumbi kunanini ngaphambili - yingakho kufuneka ukwazi yonke into malunga ne-backlink ephezulu ye-SEO, ukulingana kwe-SEO, ukulingana kwe-backlink kunye ne-link juice. Ukukunika umfanekiso opheleleyo weKhenketho yeeKhenketho zeeKhenketho kunye neekhonkco zewebhu, ndiza kuqala ngegama elithile elisisiseko.
Yintoni eyenza umxholo we-backlink ophezulu we-SEO?
Okokuqala, igama elithi "backlink" limela isixhumanisi esingenayo kwiwebhusayithi yesithathu, iblogi, okanye mhlawumbi nayiphi na enye imithombo efumaneka kwi-Intanethi.Okulandelayo, igama elithi "phezulu" lichaza uphawu oluqinileyo okanye ukusebenza kwekhwalithi ye-backlinks - ukusuka kwimbono ye-SEO. Emva koko, igama elithi "SEO" lithetha ukuba ezo zixhumanisi zewebhu zithonya i-injini ye-injini ye-injini-nokuba yinto embi, okanye i-negative-negative, ngamanye amaxesha nangendlela engathathi hlangothi. Enyanisweni, ukusebenza okwenziweyo kwe-backlinks kwi-SEO ngokuqhelekileyo kuxho mekeke kwizinto eziphambili kunye nemiqondo echazwe ngezantsi.
I-SEO Ubulungisa kunye neJoyi yeZiqhagamshelo
Masicinge ihlabathi kwiWebhu njengenkqubo yehlabathi ehlanganiswe nenani elikhulu lamaninzi axhunyiwe kunye namaphepha ewebhu. Kwaye konke kuhamba khona - umxholo wewebhu uqhubeka ukhula ukuba ufumaniswe ngenani elikhulayo labasebenzisi - abaninzi abantu bayayisebenzisa, basebenzise, ​​babelane kwaye badibanise kuyo. Ngale ndlela, zonke iiwebhusayithi, kunye nebhulo ibonakala zibandakanyeka kwinkqubo eqhubekayo yokudala nokusabalalisa igunya elilodwa lephepha, PageRank, kunye negunya lesizinda.
Ukulingana kwe-SEO yewebhsayithi yakho kulandelwa ukuba kuhanjiswe kumgangatho walo jikelele wokusebenza - owenziwe ngexabiso elipheleleyo lekhasi kunye negunya lesigunyaziso, eshaswe ngamandla ahlangeneyo wee-backlinks eziphezulu ze-SEO. Ukubeka kwisiNgesi esilula, ukulingana kwe-SEO yiwebhusayithi yakho yokukwazi ukubeka kakuhle kwi-Google SERPs. Yiyo leyo.
Hlanganisa ijusi (a. k. a. ukudibanisa ukulingana) ngokubanzi kubonwa yiinkcenkceshe zokucwangcisa njenge "subset" ye-SEO equity equity. Ngokwam, ndiyaqonda ingcamango yelisi yekhonkco njengoko "isixa" se-SEO equity redistributed xa amabini ewebhu ahlukeneyo adibana kunye. Ngoko, ikhonkco le-juice yi-flow flow ye-SEO equity - idluliselwe kwiwebhsayithi ye-host and idluliselwe kwindawo ekujoliswe kuyo.
Emva koko konke, nantsi umgca ophantsi komxholo wee-backlink eziphezulu ze-SEO. Enyanisweni, onke amagama asisiseko ashiwo ngaphambili (i. e. , I-SEO equity, i-equity equity kunye ne juice ye-link) zichazwa yi-SEO yoluntu-nje ukuqonda ukuba iGoogle isebenza njani. Enyanisweni, zilimi lokulungiselelo lwangoku, kungekhona i-Google search engine. Ngamazwi alula, zombini i-Google ngokwayo, kunye ne-Webmaster Academy yayo ayizange inike nayiphi na inkcazo ngqo kule nkinga ebunzima. Ngoko, ndiyathemba isethulo sam esifutshane malunga ne-backlink ephezulu ye-SEO kuya kuba luncedo kuwe, ubuncinane ukuba ube nesiqalo esicacileyo sokuhamba kwakho okuzayo kwi-Injini yoPhando lweeNjini Source .